Ikhosi ye-PTC CREO yeParametric Course-Uyilo, uhlalutyo kunye nokulinganisa (1/3) -Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi ye-PTC CREO yeParametric Course-Uyilo, uhlalutyo kunye nokulinganisa (1/3)
I-CREO sisisombululo se-3D CAD esikunceda ukukhawulezisa ukuveliswa kwemveliso ukuze ukwazi ukwenza iimveliso ezingcono ngokukhawuleza. Kulula ukufunda, uCreo uyakuthatha ngaphandle komthungo ukusuka kwinqanaba lokuqala loyilo lwemveliso ngokuvelisa nangaphaya.
Ungadibanisa ukusebenza okunamandla nokungqinelanayo kunye neetekhnoloji ezintsha ezinje ngoyilo lokuvelisa, inyani eqinisekisiweyo, ukulingisa kwexesha lokwenyani, kunye nemveliso eyongezelelweyo. kunye ne-IoT ukukhawulezisa ngokukhawuleza, ukunciphisa iindleko, kunye nokuphucula umgangatho wemveliso. Ihlabathi lophuhliso lwemveliso lihamba ngokukhawuleza, kwaye kuphela nguCreo onikezela ngezixhobo eziguqukayo ozifunayo ukuze wenze ukhuphiswano kwaye ufumane isabelo sentengiso.
Le khosi ijolise kuyilo loomatshini kusetyenziswa isoftware yeCREO Parametric. Kwisahluko sayo sokuqala, kuchaziwe ngokubanzi ujongano lolwakhiwo lweenxalenye, emva koko eyona miyalelo iphambili yokuzoba ye-CAD, kunye nemiyalelo efana nokukhutshwa, uguquko kunye nokutshayelwa zichaziwe. Ukongeza, iinkqubo ezinje ngemodeli yomngxunya, iifillets kunye nomphetho wokudibanisa ziyongezwa.
Ikhosi iyasebenza ngokupheleleyo, icaciswa yingcali ethi ngokuthe ngcembe iphuhlise imiyalelo kwinto ekhokelela ekunikezeleni imibala, ekunikezeleni ngemiboniso, kwindibano nakwindlela yokulinganisa.